CANABKII HORE: SHARRAXAAD, TALOOYIN KU SAABSAN DARYEELKA IYO BEERITAANKA - NOOCYADA CANABKA AH EE HORE
Ugu Weyn Ee Noocyada canabka ah ee hore
Noocyada ugu wanaagsan ee canab hore
Waa maxay canab wanaagsan hore?
Wuxuu si dhakhso ah u raraa in cudurada fangasku aysan ku sii soconin koritaankiisa.
Iyo, dabcan, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato miro qorrax leh, marka dadka kale ay filanayaan goosashada.
Kala duwanaanta sabiibta "Purple"
Kala duwanaanshaha canabka "Violet" waxaa loola jeedaa noocyada hore. Wuxuu ku filan yahay adkaysi u dhaxan daran oo uu leeyahay heer aad u sareeya oo iska caabisa cudurada kala duwan. Taaj of caleemaha yar yar yahay rinjiga midabka cagaaran cagaaran. Caleemuhu waa cagaar cufan leh, weyn, marmarka qaarkoodna yar yar. Saxanka caleen waa bubbly.
Cawska ee "Purple" kala duwan ayaa loo kala qaybiyaa caws oo leh furan bilaash ah ama furan. Canabku way ubaxsan yihiin ubaxyo bisexual ah. Kuwaas waxaa ka mid ah farabadan, dhererkoodu waa 17 cm oo ballaadhkuna wuxuu ku eg yahay 12 cm. Lugta caleemaha canabka ah waa muddo dheer, oo ku rinji cagaar.
Qiyaasta hal farabadan ayaa gaareysa 150 garaam. Berrygu waa mid dhexdhexaad ah, wareegsan, dhar guduudan, mararka qaarkoodna leh muraayado cawl iyo midab buluug ah. Saxarka ee berry waa mid casiir leh oo cufan. Waxay leeyihiin dhadhan udgoon, cabitaan aan midab lahayn, mararka qaar waxaa jira lafo.
Astaamaha ugu muhiimsan ee kala duwan ee "Violet" waxaa ka mid ah:
kooxo waa la jilicsan yahay oo shiilan;
caleemaha waa saddex-jiifa, bubbly;
miro yar oo wareegsan oo leh dhadhanka dhirta;
lugta oo dheer
Caleemaha canab "khafiif ah" khafiif ah, caleemaha waxay leeyihiin qaab qaabaysan. Taarbo goos goos ah oo lagu dhejiyo ilko fiiqan.
Waxyaabaha kala duwan ee "Purple" waxay ina keenaan sarreeyaa iyo si joogta ah. Waa mid aad u bacrin ah, caleemaha dhirta ah ayaa ka samaysan badi caleemaha.
Canabku wuxuu bilaabaa inuu bislaado ka dib 134 maalmood laga bilaabo bilowga bilowga koowaad. Waxaa la soo ururin karaa horaantii xilliga dayrta, maalmaha ugu horreeya ee Sebtember, iyo in la sameeyo khamri waxay bilaabaan inay soo qabtaan dhammaadka bisha.
Ku faa'iidooyinka kala duwan "Purple" waxaa ka mid ah:
berry waa mid aad u casiir leh, maadaama ay yihiin 84% dareeraha;
miraha way macaan yihiin, waxoogaa yar;
Dhirta cabsida leh, xitaa -27!
Sida noocyo kala duwan oo uu leeyahay wax yar yaraanta:
xasiloonida aan lahayn bakteeriyada bakteeriyada, phylloxera iyo varicella canab.
Wixii geedo beerto si ay u doortaan dhul ay ku dhajiyaan xayndaab ama bannaan, sida kala duwan ee "Violet" horay u bilaabaan inay heesaan. Wuxuu ku koraa carrada culus. Jarida, ka tago indhaha caafimaad leh, iyo waxyeelo - ayaa laga saaraa. Ka dib markii ay ka saareen geedka canabka ah fasalka ayaa si fiican loo soo celiyay.
Ceelkii, bacrimiyey ka hor beerashada humus, ayaa lagu qoday si qoto dheer ah mitir badh (on carrada bacaadka ah), iyo 20 cm (on clayey). Geed ah canab ayaa la dhigayaa meel daloolo oo daboolay carrada, waa wax yar tamped. Waxaa lagama maarmaan ah in biyaha lagu diiriyo oo kaliya biyo diirran.
Canab leh nidaam xidid xidhan yihiin beeray guga, iyo leh beeritaanka furan - dayrta ayaa lagula talinayaa.
Fasalka "Dhalo" wuxuu u baahan yahay garqaadaha. Sida ugu dhakhsaha badan ee la beeray, taageero ayaa lagu riday dhulka ku dhow, taas oo kaas oo ah geed canab ah oo sii kordhaya doonaa. Daryeelka sabiibku wuxuu ka kooban yahay dabacsanaanta ciidda, waraabinta joogtada ah, ka saarista caws. Xilliga jiilaalka ma dabooli kartid canab. Vine waxaa lagu buufin karaa xal of sulfate copper.
Xerada sannad-guurada Kherson "Khamriga Summer"
Sannadka kala duwan ee Kherson "Joogitaanka Xagaaga" waa nooc isku-jir ah oo canab ah. Kooxihiisa waa weyn, 600 garaam kasta. Waxay yihiin cufan, qaab muuqda. Berry canab waa dhexdhexaad, oval, waxay leeyihiin dhadhan isku dhafan, midabka casaan. Ubax waa dheddig, sidaas darteed waxay u baahan yihiin pollinator. Nidaamka asaasiga ahi waa mid awood badan leh, badanaa laba-heer. Buug kasta wuxuu leeyahay qiyaas ahaan 445 indhood.
Wax-soo-saarka miraha waa dhexdhexaad iyo joogto ah.
Wuxuu bilaabaa inuu hore u kaco, 100 maalmood ka dib bilowga xilli sii kordhaya. Si buuxda u rarayso heerkul aan ka yarayn 21 ° C.
Suugaanta canab ah Jubilee Kherson "Deg Deg ah" waxay yihiin:
miro gaar ah oo aad u dhadhan fiican leh;
Bisaylkiisa hore ee caleemaha sanadlaha ah;
Ku haboonaanta sii kordhaya ee waqooyiga:
oidiyoon lama saameeyo.
Dhibaatooyinka waxaa ku jira wax yar qashin qubka, kelyuhu waxay toosaan hurdada jiilaalka ka dib marka aysan isku mid ahayn.
Xerada kala duwan ee Kherson "Goobta Xagaaga" waxay kori kartaa oo midho u noqon kartaa ciidda, xitaa mid culus. Cinjirka canab si taxadar leh u baaro, ka saar xididada la qalajiyey iyo caleemaha. Xididdada waxaa lagu rusheeyaa bolthanka leh digo lo'da lagu qasi karo dhoobo. Mararka qaar hirgelinta khibradaha badani waxay ku dhajiyaan dusha sare ee maqaarka ee dhoobo.
Hase yeeshee talaabada ugu horreysa waa in godka lagu qodo qoto dheer oo ah 50 cm, nidaamka xididka furan wuu fidaa, lakabka yar ee dhulka ayaa ku shubay kuna shubay saddex baaldiyo oo biyo ah, ka dibna waxaa la daboolay ciidda. Waraabinta waa inay noqotaa mid dhexdhexaad ah. Bogagga waa inaan loo oggolaan.
Xerada Kherson "Goobta Xagaaga ee Summer" ayaa lagu beeray Sebtembar.
Daryeelka darajo waa sahlan. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu quudiyo canab iyada oo leh bacriminta fosfooraska-potassium hab wakhti go'an, natiijada ma aha muddo dheer soo socda. Si loo kordhiyo wax-soosaarku waxay isticmaalaan hawlaha ugu badan:
caleemaha qoto dheer ee qoyan ka hor ubax;
bacriminta cagaarsho leh ee boron iyo zinc;
ka saarida tiro yar oo caleemo ah oo ah meeshii laga helayo midho-dhaliyeyaasha kororka, iyo natiijada kooxaha ayaa hela tayada ganacsiga sare.
Jiiska miisaanka "White Delight"
Mid ka mid ah canab miiska ugu wanaagsan ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay White Delight. Waxay caan ku tahay kooxo waaweyn, miisaankoodu gaaro 600 garaam, laakiin waxaa jira kooxo yaryar oo miisaankoodu yahay 2 kg! Waxay badanaaba ahaadaan kuwo qadarin ah, marar dhif ah oo aan muuqan. Midabka berry waa huruud. Waxay yihiin kuwo waaweyn, oval qaab uuban, aad u badan oo casiir leh. Dhadhanka berry waa mid aad u macaan, laakiin ma xoqin.
Dalaggu waa yar yahay, halkii caadiga ahayd.
Waxay billaabmaysaa inay hore u bislaadaan, kaliya 110 maalmood.
Cuntada ugu weyn ee White Delight kala duwan ayaa loo tixgeliyaa inay tahay awood u lahaanshaha ilaalinta muuqaalka kooxaha sida ku dhowaad laba bilood, iyada oo aan lumin dhadhanka iyo bandhigga.
Waxaad ku dari kartaa halkan iyo farajinta caleemaha, ku dhawaad ​​85%.
Ku habboon yihiin beeralayda bilowga ah ee sii kordhaya.
Cuntada kala duwan Cuntada ayaa yar yar yaraanta:
Wuxuu u baahan yahay qorraxda iyo iftiinka mar walba, sababtoo ah hooska mugdiga ma haystaan ​​wakhti ay ku heesaan, waxayna dhadhamin doonaan dhanaan dhadhan;
gooynta xididdo daciif ah;
kala duwanaan la'aanta phylloxera iyo oidium;
ma jecla qabowga daran
Canaan beerto ayaa ka kooban marxaladaha soo socda:
Diyaarinta gooyn iyo geedo.
Diyaarinta meel loogu talagalay mustaqbalka canab.
Heerkulka hawadu waa inuu ahaado ugu yaraan 10 maalmood gudahood 5 maalmood.
Gooyn la beeray oo kaliya xididada wanaagsan, dhererka kaas oo ah ugu yaraan 3 sentimitir.
Baaldi biyo kulul ayaa lagu shubay godadka cowska, sidaas awgeed geedo ayaa dareemi doona raaxo.
"White delight" ayaa lagu beeray guga, dhammaadka Abriil.
Tan iyo markii ay canabkeedii Caddaan Cagaarka ah waxaa lagu gartaa indhaha bacriminta sare ee saldhigga caleemaha, waxaa lagu jarjaray 2 indhood.
Xayawaanku waa mulched iyada oo la isticmaalayo balka, caws. Meel kale oo muhiim ah oo daryeelka ah waa bacarimid 2-3 jeer inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, 3 asbuuc walba. U hubso inaad soo saarto haramaha, xidh dhirta iyo biyaha.
Waxa kale oo xiiso leh in laga akhriyo ku saabsan canab ah ugu wanaagsan gobolka Moscow
Fasal canab "Kodryanka"
Kala duwanaanta aan la qabin waxaa loo tixgeliyaa "Codrean". Tani waa miro miis ah, Bisaylkiisa hore, koraya xitaa carrada ugu saboolsan.
Noocyo adag, shimbiro waaweyn (marmarka qaarkood miisaankoodu gaaro 1.5 kg), miro ballaaran leh jidhka cufan waa sifooyinka ugu muhiimsan ee Codreanka kala duwan. Berry waa mugdi, guduud, dhadhanka caadiga ah.
Faa'iidada oo joogto ah oo joogto ah.
Waxaad qaadi kartaa miro bislaaday kadib 110, marmarka qaarkood 118 maalmood.
Ku faa'iidooyinka waxaa ka mid ah:
soo bandhigid aan caadi ahayn;
iska caabinta cudurka iyo dhaxan;
ilaalinta muuqaalka inta lagu jiro gaadiidka.
Ka mid ah cilladaha kala duwan ee Codreanka waa la ogaan karaa ujeedka isboortiga. Laakiin haddii si sax ah loo shaqeeyo, tusaale ahaan, buufin gibberellin, ka dibna waxaad ka heli kartaa miro ballaaran oo aan miraha.
Caleemaha "Kodryanka" waxaa lagu beeray meel bannaan oo qorrax leh. Bannaanka guga wuxuu dhacaa ka hor inta aan dhaqdhaqaaqa casiirka lagu shubo gooynta. Sida qalabka beerto ayaa loo adeegsadaa gooynta laga bilaabo geedka canabka ah ee sanadlaha ah ama saplings sanadlaha ah. Caano ka hor beerashada waxaa la bacrimiyey leh Bacriminta organic iyo macdanta labadaba.
Kala duwan oo lagu beeray "Kodryanka" guga, ka hor inta aanad ku nasan.
Daryeelka waa mid fudud: waraabinta joogtada ah, mulching, bacarimiso iyo bacriminta, daboolaya xilliga qaboobaha. Fruiting inta badan waxay bilaabmaa sanadka saddexaad. Laakiin, si taxadar leh, "Kodryanka" ayaa nagu farxi doona canab qurux badan sanadka labaad.
Sannad roobaadka, noocyada kala duwan waxaa lagu buufiyaa gibberellin.
Labadii sanaba mar, compost ama humus waxaa lagu soo bandhigay ciidda.
Waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo buufinta ka hortagga ah ee Mikosan.
Kala duwanaanta canabka "Muscat pink early"
Caleemaha kala duwan "pink muscat" waxaa lagu gartaa joogitaanka caleemaha cas, caleemo cagaaran. On caleemaha muuqaalka sare iyo hoose hooseeya. Ubaxa bisexual, i.e. uma baahna pollinators dheeraad ah.
Qaabka rucubadu waa muddo dheer, oo u eg boodhadh. Qaybaha cabbirka yar, qiyaastii 200 garaam. Berry waa wareegsan, casaan mugdi ah, maqaarku waa mid adag. Dhadhanka jidhku waa jilicsanaan, oo qurux badan, oo leh dhadhan qoyan. Xididku waa mid xoogan. Caleemaha sanadlaha ayaa si fiican u bislaadaan.
Kala duwan "Muscat Pink early" ayaa keena celcelis ahaan wax soo saarka.
"Pink Muscat" wuxuu bilaabmaa inuu ku riixo 140 maalmood. Waqtiga beertu waa toddobaadkii ugu dambeeyey ee Sebtembar.
caabbi baraf ah;
Kala duwan ma aha jiilaalka-adag, waxay xitaa u dhiman kartaa qabow, waa arrin aad u cayilan oo ku saabsan cimilada.
Xasaasiyadda liicinta ee caarada iyo oofiyada.
Waa mid aan loo adkeynin caleen-caleemo iyo phylloxera.
Ukumaha ayaa loo daadshey, iyo berry waa diirka.
Waxaa waxyeelley caarada caarada.
Badanaa waxaa jira kallana.
Canab beerto ayaa ka mid ah:
Doorashada meel ku haboon;
qodaya ceelka dhulka;
buuxinta ceelka ciidda bacrin ah lagu qaso digada iyo macdanta;
oo tuulmo caaro ah baa lagu dul dhigay geed timireed, oo jaranjarna waa la burburin doonaa.
godkii ayaa la qariyey dhulka ka hor bilowga koritaanka;
waa in la daboolo sapling, tusaale ahaan, la jaro dhalooyinka caaga ah;
biyo badan oo canab ah.
Canab waxaa lagu beeray guga, laga bilaabo bartamihii Abriil ilaa dhammaadka May. Beerta xilliga dayrta waxaa la sameeyaa laga bilaabo Sebtembar ilaa Oktoobar, ilaa ay ka bilaabanto dhaxan marka hore.
Sannadaha ugu horeeya ee koritaanka sabiib ah, ciidda u dhow duurka waa la furfuray iyo weeded. Iyada oo la imaanayo guga, xididdada khafiifka ah ayaa laga saaraa taasoo xakameysa koritaanka nidaamka xididka. Waraabinta beeraha "Muscat pink early" waxaa loo baahan yahay 4 jeer sannadkii, waxaa lagama maarmaan ah in lagu quudiyo macdano leh arrimo dabiici ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyada canabka ah ee hore 2019